PeerTube 2.4 inouya nekuvandudzwa mukuenzanisa, admin interface uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
PeerTube 2.4 inouya nekuvandudzwa mukuenzanisa, admin interface uye nezvimwe
Iyo PeerTube 2.4 shanduro nyowani yakaburitswa, mune izvo zvishandiso zvine mwero zvakagadziridzwa, pamwe nekwanisi yekuwedzera majeti, zviziviso zvekunyunyuta, kugadzirisa mune zvakataurwa uye maneja interface uye nezvimwe.
Kune avo vamusingazive PeerTube, ndinofanira kukuudza kuti iyi ipuratifomu yakasarudzika yekuronga vhidhiyo yekushambadzira uye kutepfenyura vhidhiyo. PeerTube inopa mutengesi-yakazvimirira imwe nzira kune YouTube, Dailymotion, uye Vimeo, uchishandisa P2P-yakavakirwa zvemukati yekuparadzira network uye kubatanidza vashanyi mabhurawuza.
PeerTube inoenderana nekushandisa WebTorrent, inomhanya mubrowser uye inoshandisa WebRTC tekinoroji kumisikidza P2P-yakananga yekutaurirana chiteshi pakati pebrowser uye neActionPub protocol, ichibvumidza maseva akaparadzaniswa kuti abatanidzwe nevhidhiyo mune yakazara federated network umo vashanyi vanobatanidzwa mune zvemukati kuendesa uye vanokwanisa kunyorera kuzviteshi uye gamuchira zviziviso zvemavhidhiyo matsva.
Iyo federated network ye PeerTube inoumbwa senharaunda yemaseva madiki vhidhiyo yekugamuchira zvakabatana, imwe neimwe ine mutariri wayo uye mitemo yayo inogona kutorwa.
Sevha yega yega ine vhidhiyo inoita basa rakafanana neBitTorrent, mune maakaundi evashandisi evhavha iyi nemavhidhiyo avo.
Chii chitsva muPeerTube 2.4?
Mune ino vhezheni nyowani yePeerTube 2.4 moderation zvishandiso zvakawedzerwa. Pamusoro pekuzivisa mamonerita nezvematambudziko mavhidhiyo, Wakawedzera kugona kutumira zviziviso nezve zvinogumbura maakaunzi uye makomendi
Vashandisi vakatumira yambiro yekunyunyuta izvozvi gamuchira chiziviso chekugamuchira kana kuramba chichemo, ine noti inogona kubva kumudzviti. Chikamu che "My Abuse Reports" chakaonekwawo mumarongero eakaundi, kwaunogona kuona runyorwa rwezvichemo zvakanyoreswa uye kutumira meseji kumutungamiriri.
Kuwedzera pakukwanisa kupinza vhidhiyo majeti pane saiti, rutsigiro rwakawedzerwa zvakafanana kupinza playlists.
Wakawedzera kugona kuratidza akawanda akatorwa (clip) yeimwe vhidhiyo mune yekutamba panguva. Kuti uwedzere zvinongedzo kumativi akasiyana evhidhiyo paunenge uchiwedzera mavhidhiyo kuzvinyorwa zvekutamba, sarudzo yave kuwanikwa kubudikidza iyo yaunokwanisa kuseta iyo offset uye saizi yeinotevera ndima. Iri basa rinogona kushandiswa, semuenzaniso, kugadzira remix kubva kune anonyanya kunakidzwa mavhidhiyo mavhidhiyo.
Wakawedzera plugin kuwedzera zvirevo kumavhidhiyo. Nerubatsiro rweiyo plugin yakadomwa, mushandisi anogona kudoma iwo ruzivo uratidzwe pane imwe nguva yekutamba yevhidhiyo.
Iyo interface yekunyora makomendi yakagadziridzwa: Bhatani rine chinongedzo chekushandiswa kweMarkdown fomati yakawedzerwa uye kugona kudzima kana kugadzirisa makomendi anoramba asina kupindurwa kwaitwa.
Muchidimbu chemutungamiri, paunenge uchishanda netabhu mumenyu, kupenya kwemamwe matabu kunopihwa kuti vaparadzanise. Marongero ematafura ari mushandisi yekushandisa tebhu akachinjwa: mabhatani ane zviito ave kuratidzwa kuruboshwe, zvichiita kuti zvive nyore kushanda pane nharembozha. Matambudziko anoratidzwa sezviratidzo zvekuona uye zvikamu zvevashandisi zvakasimbiswa mumarudzi akasiyana.
Yakavandudzwa fomu yekugadzirisa yakaratidzwa mushure mekuisa kana kugadzirisa vhidhiyo. Menyu yekusarudza chiteshi inoratidza chiratidzo cheiyo chiteshi chazvino uye mitauro yekusarudza mitauro inoratidza mutauro wazvino.
Basa rakaitwa kuwedzera mashandiro: iwo wekutanga mutoro weiyo node interface ikozvino iri kukurumidza zvakanyanya.
Finalmente kana uchida kuziva zvakawanda nezve iyi chikuva kana nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa ruzivo nekuenda ku kune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » PeerTube 2.4 inouya nekuvandudzwa mukuenzanisa, admin interface uye nezvimwe
Pamusika, Red Hat's Nyowani Kutanga Kukurumidzisa Hybrid Cloud Innovation
Manjaro 20.1 Mikah ikozvino yave kuwanikwa, neLinux 5.8 uye aya mamwe matsva